Zon’olombelona: Ratsy laza i Madagasikara | mandimby maharo
Zon’olombelona: Ratsy laza i Madagasikara
Posted on 29 May 2013 by Mandimby Maharo
Nitafa mivantana tamin’ireo mpanao gazety tao amin’ny Ivongazety Malagasy Antsakaviro omaly talata 28 May i Christian Mukosa, mpanadihady misahana an’i Afrika ao amin’ny Amnesty International. Nitondrany fanazavana lalindalina kokoa ireo voalaza ao amin’ilay tatitra taona 2013 momba ny zon’olombelona eto Madagasikara nataon’ity fikambanana iraisam-pirenena ity . Nazavainy tamin’izany fa fanadihadina tany amin’ny toerana nisin;ny tsy fanajana ny zon’olombelona mihintsy no natao ka nafahana namoaka io tatitra io. Tatitra izay manambara fa misy famonon’olona tsy ara-dalana eto Madagasikara. Ny ny mampalahelo hoy izy dia ny mpitandro filaminana mihintsy no voarohirohy amin’izany. Nasiany teny manokana koa ny fampitahorana ireo mpanao gazety/mpampita vaovao sy ireo mpitondra fivavahana sahy miteny am-pahibemaso izany fihetsika mamoafady izany. Tsy nny ambany ravinahitra ihany no ahitana ireo fa ety andrenivohitra ihany koa.
Manoloana izany nefa hoy izy dia tsy misy fandraisana andraikitra ataon’ny fitsarana. Misy ny tsy maty manota amin’ireo mpisetrasetra ireo. Ka na dia efa nisy aza fihaonana sy fifampiresahana tamin’ny tompon’andraikitra ambony ao amin’ny fahefam-pitsarana dia tsy mbola nisy mihintsy hetsika nataon’izy ireo. Noraisiny ohatra ao amin’io tattra io ary nitondrany fanazavana mazava ny raharaha Michel Rehavana. Eo koa ny famonona ankitsirano ilay mpitondra fiarakaretsaka Hajaharimananirainy Zenon izay tsy nanaovana fanadihadina akory.
Ankoatry ny fampihorohorona mahazo ny mpanao gazety araka izay voalaza etsy ambony dia misy koa ny fanampenam-bava azy ireo. Voahosihosy ny fahafahana miteny sy maeho hevitra eto Madagasikara raha ny voalazany. Mpanao gazety efatra hoy izy no nanaovan’ny zandarimaria fanadihadina ny taona 2012 noho ny fitanterany ny zava-misy momba ny fanondranana antsokosoko andramena. Na dia tsy azon’ny Amnesty International ampiasaina mivantana amin’ny fanaovana ny tatitra aza nefa ireny lahatsoratra an-gazety ireny dia manampy azy ireo hamaritra ny sehatra ho hadihadina.
Raha izay ny amin’ny Amnesty International dia naharay tatitra momba an’i Madagasikara’avy amin’ny Centre Europe-Tiers Monde (Cetim) koa ny Filankevitry ny Zon’olombelona eo amin’ny Firenena mikambana. Tatitra izay milaza ihany koa ireo sehatra efa voatanisan;ny Amnesty International ireo. Asin’ity tatitra ity tsindripeo kosa nefa ny momba ny fanosihosena ny zon’olombelona any amin’ireo toerana be harena voajanahary. Sehatra iasan’ny Cetim rahateo ny fampifandanjana ny fampandrosona any amin’ny ilabolantany avaratra sy aty amin’ny tapany atsimo. Itondrany fanakianana noho izany ny fitrandrahana tsy ara-drariny ny harena an-kibonitany ataon’ireo orinasa lehibe iraisam-pirenena mitrandraka ny atitany sy misahana ny agro-busness. Iray tsikombakomba amin’ny fitondram-panjakana izy ireo. Hita izany amin’ny fanaovana kolikoly, ny fanaovana tsinotsinona ireo mponina eo amin’ny toerana irin’izy ireo hotrandrahana, ny fanalana amin’ireo mponina ireo ny fihariany izay manohitohina ny zon’olombelona avy hatrany. Noho ny fiarovan’ireo orinasa ireo ny tombotsoany dia mandroaka ireo mponina nanamaintsy molaly ny tany izy ireo. Maro noho izany ireo mpifindra monina ao anatin’ny firenena ihany.
Manentana ireo voakasik’ireo rehetra ireo noho izany ny Cetim mba handray ny andraikiny. Angatahana ireo firenena Eraopeana mba hampitsahatra ny fanomezana fitaovam-piadina ho an’i Madagasikara. Tany izay mandalo olana politika amin’izao fotoana izao. Entanina koa ireo firenena niavian;ireo orinasa lehibe voalaza ireo mba handray fepetra amin’izy ireo tsy handroba ny haren’ity firenena ity. Miantso ny Firenena mikambna koa ny Cetim mba hanatevindaharana ny ezaka ataon;ny Vondrona afrikana amin’ny famahana ny olana eto Madagasikara. Famahana olana hitondra ity firenena ity ho any amin’ny tetezamita demokratika sy hisin’ny lamina sosialy. Mampiantso fanadihadina manokana koa ny Cetim mba hanatontosa fidinana am-potony hijery ny famonoan’olona ankitsirano misy eto Madagasikara. Ary miantso ny filankevitry Firenena mikambana misahana ny zon’olombelona handinika ny raharaha eto Madagasikara.
Tags: Amnesty International, Cetim, Droit de l'homme, Fitsarana, Madagasikara, Operation Tandroka, zon'olombelonaCategories: Uncategorized